Izimonyo Caudalie: izibuyekezo zamakhasimende, indaba umsuka sha
Ukuba ngokucophelela watadisha amasampula ezihlukahlukene izimonyo, ukukhetha kwethu, sima sha Caudalie. Izibuyekezo ukusuka amakhasimende ezilandelayo: lonke uhla imikhiqizo wadala kuphela kusuka izithako zemvelo ukuthi ngokunenzuzo kuthinte isikhumba, usebenzisa ubunzima ubalekela, ukoma futhi umuzwa constriction. Amalungiselelo ukusiza ekulweni isikhumba ukuguga ngempumelelo.
Kusukela ngo-1995, le mikhiqizo ukhiqiza futhi silwenza umkhaya, u-Tom. Izidakamizwa yokuqala zisekelwe imbewu yamagilebhisi, ngokushesha badayise. Ngo-1996, inkampani yasayina isivumelwano ne-University of Pharmacy. Yingaleso sikhathi lapho waqala izifundo lokuqala Ukwakheka kwamakhemikhali imbewu yamagilebhisi. Phakathi ukuhlolwa laboratory wembula ukuthi aqukethe umsoco iningi lawa mathambo - polyphenol, okuyizinto umsebenzi antioxidant (qinile than amavithamini C no-E).
Cishe ngokuphazima kweso, it wadedelwa umugqa imikhiqizo ukunakekelwa umzimba, ezazihlanganisa sula ukhilimu, izinzwane, namafutha kwesisindo, ukuhlanzwa Scrubs, eshaweni si, amashampu kanye lwezakhamzimba kusukela ikhodi. Izimonyo ibhekane esiqinile Isilawuli dermatological futhi evivinywa izilwane. Ngemva kweminyaka eminingi iziphathimandla umsebenzi ngo-2009, inkampani waqala ukuthuthukiswa anti-ukuguga okhilimu kanye nokuvikelwa. Lo mkhiqizo sekuxhumekile izithako ezintathu ezinkulu okukhethekile: polyphenol, viniferin futhi resve-ratrol umvini.
Ngokombono abakhiqizi ngokwabo, kulolu chungechunge ubhekana nezinselele ezifana ukuguga kwesikhumba, lesikhumba, ukulahlekelwa kuyaqina, ukucindezeleka oxidative, ukoma. Yonke nomkhakha we imikhiqizo yezimonyo nakanjani ephephile futhi akusho baxabane nomzimba, ekhiqizwa, njengoba kushiwo ngenhla, kusukela izingxenye isitshalo nokulawula maqembu edingekayo ngaphambi ukukhululwa kuphela, lokhu kuyisiqinisekiso sokuthi Caudalie izinga.
Izibuyekezo Umthengi Rave. I kuqala abakhiqizi - ukwenza yilowo nalowo owesifazane osuke uzilungise futhi ezikhangayo ngosizo eziklanyelwe okhilimu, lotions kanye emulsions. I oyisisekelo lenkampani - iwukuba unakekele amakhasimende abo. Ezimonyweni emaphaketheni sisebenzisa moisturizers ekhethekile, okusho isikhathi eside ukugcina izakhiwo ewusizo nokwelapha. Ngenxa lolu hlobo emabhokisini asikho isidingo ukusebenzisa nezivimbelakuvunda ezingeziwe ziyingozi empilweni kwamangqamuzana esikhumba.
Namuhla, inkampani yabagibeli eziningi avulekele emhlabeni wonke. Ngamunye abasebenzi abaqeqeshiwe, ukuhlinzeka ithuba eliyingqayizivele amakhasimende ukuzwa izinga wokuhlanza emulsions, Scrubs, toners, serums kanye ezikhishwe ukudonsa-nokulwa umthelela elimazayo imvelo. Ngisho njengenye yezinkinga ezinzima kakhulu isikhumba zingaxazululwa izimonyo Caudalie. Izibuyekezo yethuliwe ezihlukahlukene sites yenkampani.
ukwelashwa abahlukile nge uchungechunge Caudalie kuzokuvumela ukubheka 100%. Zonke amasu okuhloswe ngaso ekubuyiseleni kuyaqina kwesikhumba, kanye cell ukuvuselelwa. Enough ukuba kudlule ingqikithi izinqubo emihlanu ephezulu ukusebenza, futhi uzophawula ngcono.
izindlela zanamuhla zihlanganisa massage ahlukahlukene nge uwoyela yamagilebhisi, ubuso nokunakekela umzimba, zokugeza kwezokwelapha futhi elimnandi, buso, peels, electrotherapy, imisindo ephansi, iontophoresis. Noma iyiphi inkinga ziyoxazululwa kanye izimonyo Caudalie. omuhle, omubi sekutholakale ukubuyekezwa komkhiqizo.
Sekukonke, umkhiqizo kakhulu ngemali ephansi, okuyinani eliphakeme uyayiqeda imibimbi, lesikhumba futhi ukuluma. Siyabonga sicashunwa uhlaliseke of polyphenol nesikhumba sakho uzobe moisturized, avikelwe futhi bobusha.
Sisebenzisa self-ukushuka: ukubuyekezwa kanye nemishini
Clarins Double Serum: impendulo - indlela kukholakale?
Indlela yokusebenzisa blue neso shadow amehlo aluhlaza